【 သရျောစာ 】 ဘိုးသိကွားနှငျ့ နတျငယျမုဒိနျး | Opinion Leaders
【 သရျောစာ 】 ဘိုးသိကွားနှငျ့ နတျငယျမုဒိနျး
အရှအေ့နောကျ ယူဇနာတဈသောငျး၊ တောငျမွောကျ ယူဇနာတဈသောငျး ရှိသော မဟာသုဒသနအမညျရှိ တာဝတိသာနတျပွညျရှိ ရှေးကောကျခံ သိကွားမငျးအစိုးရ၏ နှဈပတျလညျ နတျသဘငျညီလာခံကွီး စတငျလပွေီ။
''တို့ သိကွားမငျးရဲ့ ညီလာခံ….နတျကွီးမြားရဲ့ ညီလာခံ'' ဆိုသော သီခငျြးသံမြားက ပငျလယျကသဈပငျအနီး ညီလာခံကငျြးပရာ သုဓမ်မာသဘငျဇရပျအတှငျးမှ ပြံ့လှငျ့လကျြရှိလသေညျ။
ရောငျဝါမြိုးစုံ တောကျပနသေော ပငျလယျကသဈပှငျ့တို့၏ ရနံ့ကလညျး ယူဇနာတဈရာတိုငျတိုငျ ပြံ့နှံ့မှေးကွိုငျနေ၏။(၃၁) ဘုံအတှငျး တာဝနျရှိကွကုနျသော နတျကောငျး၊ နတျမွတျ၊ နတျစမတျမြားမှသညျ နတျကြိုး၊ နတျပကျြ၊ နတျဒုက်ခိတမြားပါမကနျြ ညီလာခံတကျရောကျရနျ ရောကျရှိကွပပွေီ။
''သောငျးခနျးလုံးကသော၊ ဘုနျးတနျခိုးကွီးကွောငျး၊ သောငျးခနျးလုံးကသော၊ ဘုနျးတနျးအဦး၊ တဇောကွညော ကျြာသဲ၊ မို့မို့ဝဆော အာကာဘုံထဲ''
နတျတို့သနငျး သိကွားမငျးကွီး ထှကျခါနီးပွီမို့ တဈသိနျးမြှရှိသော နတျလျောစပီကာအပေါငျးမှ ညီလာခံသီခငျြးကို ပိတျကာ သိကွားပငျ့နတျခငျြးကို ဖှငျ့ကွလတေော့သညျ။
ယခုညီလာခံတှငျ ဘိုးတျော သိကွားမငျးကွီး အဘယျအရာကိုစီးပွီး ထှကျမညျကို နတျအပေါငျးက သိလိုစိတျစောနကွေသညျ။ယခငျ့ယခငျ ညီလာခံမြားတှငျတော့ သိကွားမငျးသညျ သဘငျထှကျစံရာတှငျ ဧရာဝဏျအမညျရှိ ဆငျကို စီးတျောမူလရှေိ့၏။သို့သျော တိခဈြသူနတျအုပျစုက တိရိစ်ဆာနျညှငျးပနျးမှုဖွငျ့ တရားစှဲမ ညျခွိမျးခွောကျသဖွငျ့ သိကွားမငျးလညျး ဧရာဝဏျဆငျကွီးအား သဈတောဌာနသို့ ခဏပွနျအပျလိုကျရသညျဟူသညျ။မကျြလုံးပေါငျး တဈထောငျရှိသူ၊ အသူရာတို့ကို အောငျနိုငျခဲ့သူ၊ ဝရဇိနျလကျနကျကို ပိုငျဆိုငျသူ ဘိုးတျောသိကွားကွီးကား တိခဈြသူနတျတို့ကို ကွောကျလှသဖွငျ့ နတျသဘငျသို့ ခွလေငျြပငျ ကွှရောကျလာလတေော့သညျ။
နကငျးကွီးကားကား၊ ဝတျဖွူစငျကွယျဖွငျ့ ဘိုးသိကွားကွီးသညျ မကျြမှောငျကိုကွုံ့လကျြ ညီလာခံထဲ ဝငျလာလတေော့၏။
''ဟဲ့..သုဇိတာတို့၊ သုမာလာတို့…ဒီလျောစပီကာတှေ ဘယျအကောငျက ဖငျယားပွီး ဖှငျ့သလဲကှယျ..ဒီလောကျ မီတာခတှေ သုံးဆလောကျတကျနခြေိနျမှာ လျောတှအေပွိုငျဖှငျ့ပွီး ငါ့ကို ဒဝေါလီခံအောငျ လုပျနကွေသလားဟေ့..အခုပိတျခိုငျးစမျး'' သုဇိတာ၊ သုမာလာ၊ သုနန်ဒာ အစရှိသော သိကွားကတျော သုသုလေးတို့ကား ဘိုးသိကွား၏ အလိုမကသြံကွောငျ့ ပွာယာခတျကကြုနျ၏။မကွာမီ လျောစပီကာမြား ပိတျသှားပွီးနောကျ ဝိဇယုတ်တရခရုသငျးသံ ထှကျပျေါလာလသေညျ။နတျညီလာခံကား စပပွေီ။
ဝသ၀တီ၊ နိမ်မာနရတိ၊ တုသိတာ၊ ယာမာ၊ တာဝတိသာ၊ စတုမဟာရာဇျ စသော နတျပွညျခွောကျထပျမှ ကိုယျစားလှယျအသီးသီးမှ အဆိုမြားတငျသှငျးကွ၊ နတျဝနျကွီးမြားက ရှငျးလငျးကွဖွငျ့ ညီလာခံကွီး အသကျဝငျလှုပျရှားနတေော့၏။
မကွာမီ ညီလာခံကွီး ပွီးစီးတော့မညျ။ဘိုးတျောသိကွား ကိုယျတိုငျသာမက နတျအပေါငျးတို့ကလညျး နန်ဒာဝနျဥယြာဉျတျော မဟာနန်ဒကနျတျောကွီးဘေးတှငျ ကငျြးပမညျ့ နတျဒငျနာပါတီကိုသာ စိတျစောနကွေသညျ။ငွိမျးခမျြးရေး လာရောကျဆှေးနှေးသော အသူရာပွညျမှလညျး အသူရပွညျဖွဈ အသူရာဝေါကာအရကျမြား လာရောကျဆကျသထားသညျဆိုသညျ့ သတငျးက ရှကီသမား စတုမဟာရာဇျနတျနတျတို့အတှကျ လခေဉျြမြားပငျ ပွို့စတေော့သညျ။
ထိုအခိုကျ စညျးဝေးသူ နတျထုကွီးထဲမှ ကလေးငိုသံမြား ဗွဲခနဲ စီနအေောငျ ထှကျလာလတေော့သညျ။နတျဆောကျလုပျရေးဝနျကွီး၏ ရှငျးတမျးကွီး ဖတျပွခြိနျတှငျ အိပျငိုကျနသေော ဘိုးတျောသိကွားမှာ ကလေးငိုသံမြားကွောငျ့ အလနျ့တကွား ဖွဈသှားလေ၏။
''ဟဲ့..ဟဲ့..ညီလာခံထဲ ကလေးမချေါရဘူးလို့..ငါ အမိနျ့ထုတျထားတယျလကှယျ..ဘယျက ငိုသံတှတေုနျး''
''ဟဲ့..ပလုတျတုတျ'' အစိမျးအုပျစု ဟု အသံကွားသညျနှငျ့ ဘိုးတျောသိကွားသညျ သူထိုငျနသေော ဗန်ဒုကဗ်ပလာမွကြောကျဖြာကို လကျနှငျ့ဖိကာ စိုးရိမျတကွီး ဖွဈသှားလေ၏။
''စိုးရိမျတျောမမူပါနဲ့..ဖြာ့…လူ့ပွညျက အစိမျးအုပျစုကို ပွောတာမဟုတျပါဘူး..လူ့ဘုံမှာ တညျရှိတဲ့ (၃၇) မငျး နတျစိမျးအုပျစုကို ပွောတာပါ..ဖြာ့''
ထိုအခါမှ သိကွားလညျး သကျပွငျးကို နာနာခနြိုငျတော့၏။''အိမျးလကှယျ..လူ့ပွညျ အစိမျးအုပျစုဆိုရငျတော့ ငါသိကွားလညျး ကွောကျသကှယျ့..တျောကွာ…တာဝတိသာ အာဏာသိမျးမလား..နတျထုထဲ အစိတျသားထညျ့ပေးပါ ခွိမျးခွောကျမလား ကွောကျလို့ပါကှယျ..ကွောကျလို့ပါ ကဲ..ကဲ..ဟုတျပါပွီ…ဒါနဲ့…နတျသဘငျအစညျးအဝေးထဲ ကလေးမချေါလာရလို့ စညျးကမျးထုတျထားပါလကျြ…ကလေးချေါလာတာ ဘယျနတျစိမျးတှမြေားတုနျးဟဲ့''
''ဘယျသူမှ ချေါလာတာမဟုတျပါဘူး.ဖြား..သူတို့ဟာ သူတို့ လာတကျကွတာပါ..အဲ့ဒါကို နတျတာဝနျထိနျးတှကေ အတငျး လူပွညျပွနျဆငျးခိုငျးလို့ ငိုနကွေတာပါဖြာ့''
''ဟငျ..ဘယျသူတှတေုနျး..ငါ့ တဈယောကျခငျြး ထရပျပွကွစမျး''
ထိုစဉျ ကွကျတောငျစညျးကလေးနှငျ့ အသကျ (၂) နှဈအရှယျ ကလေးတဈဦး မတျတပျထရပျလတေော့သညျ။
''မီးမီးက မငျးမဟာဂီရိနတျ ပနျးဘဲဦးတငျ့တယျရဲ့ တူမ၊ သုံးပနျလှမဒှေးလှရဲ့ သမီး ရှငျနှဲမိ ချေါ မနှဲလေးနတျပါ..ဘိုးဘိုးသိကွားကွီးရှငျ့''
''အေး..မနှဲလေး..မနှဲလေး..အငျးသိပွီ..တကောငျးအုပျစုကပဲ..ဒါနဲ့ ညညျးဘေးက ကလေးမကရော''
''ဒါက မီးမီးရဲ့ တပညျ့ နတျသူငယျမ မကွာဥပါ..ဘိုးဘိုးသိကွားကွီးရှငျ့''
''အောငျမယျ..နှဈနှဈသမီးက တပညျ့တှေ ဘာတှနေဲ့ပါလားဟ''
''ဘိုးဘိုးသိကွားရဲ့ မှေးစားသား လေးကြှနျးမောငျမောငျလညျး တှနျးလှညျးထဲမှာ ပါလာပါသေးတယျ..ဖြာ့''
''အလို..ကလေးနတျတှေ အစုံအလငျပါလားဟဲ့…အသကျ ဆယျ့ရှဈနှဈ မကြျောသေးပဲ…နတျပွညျတာဝနျ ထမျးခိုငျးရငျ လဘောလောနဲ့ ငွိမှာစိုးလို့…အသကျမပွညျ့တဲ့ ကလေးနတျတှကေို ဘိုးဘိုးသိကွားက ညီလာခံလှတျငွိမျးခှငျ့ပွုထားပွီးသားလကှေယျ..ဘာကွောငျ့ ရောကျလာရသလဲ..ကလေးတို့..လြှောကျတငျကွစမျး''
''ဟဲ့.ညညျးတို့ ညညျးတို့တှေ…လူ့ပွညျနလောတာပဲ လူ့သကျနဲ့ဆို နှဈရာခြီနကွေပွီ..ဘယျ့နှယျ့ အခုမှ မနခေငျြရတာလဲ...ဘာလဲ..လူတှကေ ဘဲဥပွုတျ မဆကျကွတော့လို့လား''
''ဘဲဥပွုတျ ငတျတာက အရေးမဟုတျပါဘူး..ဘိုးဘိုးသိကွား..အခုဟာက လူ့ပွညျမှာ သကျငယျမုဒိနျး ဆိုတာတှေ ခတျေစားနပေါတယျဖြား..ခတျေစားနပေါတယျ''
''အလို…သကျငယျမုဒိနျး..အငျး..ဟုတျပ..ဟုတျပ..အခုတောငျ..လူပွညျက နပွေညျတျောဆိုတဲ့ အစိုးရမငျးတို့ ဌာနီကွီးက မူကွိုကြောငျးတဈခုမှာ သကျငယျမုဒိနျးဖွဈလို့ဆိုကှဲ့''
''မှနျပါ့ဖြား…သကျဆိုငျရာဌာနတှကေ တရားခံကို စုံပွီးစမျးနကွေပါတယျဖြား..ဒါပမေယျ့ တရားခံက တျောတျောနဲ့ မပျေါနိုငျဘူးဖြား''
''အျော..ဒီကလေးမနှယျ့..စကားမတတျတတတျ၊ မပီကလာနဲ့ ပွောရော့မယျ…စုံပွီးစမျးတာ မဟုတျဘူး..စုံစမျးတာလို့ ပွောစမျးပါကှယျ''
''မဟုတျပါဘူး ဘိုးဘိုး…သူတို့က ဒီနှာခေါငျးပေါကျလောကျ ကြောငျးလေးကနေ အိမျအပွနျလမျးက ကိစ်စကို အာဏာ၊ ပါဝါ၊ အသပွာ အားတှအေစုံနဲ့ ပွညျသူကို သှေးတိုးစမျးသလို လုပျနကွေလို့ စုံပွီးစမျးတယျလို့ ပွောတာပါဖြား''
''အိမျး..ကွားတယျ..ကွားတယျ..ဘိုးဘိုးလညျး ဒီသတငျးကွားပွီး တယျလညျး စိတျထဲ မသကျသာလှဘူး..ဒါနဲ့…အမှုက တရားခံဖမျးနိုငျသှားပွီဆိုကှဲ့''
''ပွညျသူအမြားစုကတော့ ဒှိဟနဲ့ပါ..ဖြား…စဈဆေးပွီး အပွဈမရှိပါဘူးဆိုပွီး ပထမတဈခါ လှတျလိုကျတဲ့ တရားခံကို ဒုတိယအကွိမျကြ တရားခံဆိုပွီး ပွနျဖမျးတယျဆိုတော့..ထငျကွပွီပေါ့ဖြား''
''အေးပေါ့..အေးပေါ့...ဒါနဲ့ ညညျးလေးတို့ကရော ကြုပျတာဝတိသာကို ရောကျလာကွတာ ဒီကိစ်စနဲ့ ဘာဆိုငျသတုံး''
''ဆိုငျတာပေါ့..ဘိုးဘိုး..မီးမီးတို့က ကလေးတှလေေ ဖြား''
''နတျလညျး နတျနတျပဲ ဖြား..လူမငျးဘုနျးကွီး နတျမငျးမနသော ဆိုတဲ့စကား ကွားဖူးတယျ မဟုတျလားဖြား.. အခု လူမုဒိနျးသမား ဘုနျးကွီးရငျ နတျကလေးတှလေညျး ဘယျနနေိုငျမတုနျးဖြား…တျောကွာ သကျငယျမုဒိနျးပွီးလို့ နတျငယျမုဒိနျးဖွဈလာရငျ ကိုယျကြိုးနညျးမှာဖြား.ဒါကွောငျ့..လူ့ပွညျကနေ နတျပွညျကို ပွောငျးရအောငျ ထရနျစဖာ လာတငျတာပါဖြား''
ဘိုးသိကွား ခေါငျးစားလပွေီ။''အိမျး..နတျသူငယျတှနေဲ့တော့ ခကျတာပဲ'' ''မခကျပါဘူးဖြား..လုံခွုံပါတယျဆိုတဲ့ မူကွိုထဲတောငျ ဒငျးတို့က ဝငျဒိနျးသေးတာ..မီးမီးတို့ နတျကှနျးတှဆေိုတာ တံခါးတှဘောတှေ ရှိတာမဟုတျဘူးဖြား..ဘဲဥဝငျဆကျသလိုလိုနဲ့ ဒိနျးသှားမှာ စိုးပါတယျဖြား''
''ကဲ..ကဲ…ဒီကိစ်စ ဘိုးဘိုးသိကွား ဖွရှေငျးပေးပါ့မယျ…စတုမဟာရာဇျဘုံးအောကျက နတျစိမျးတှကေို ရာထူးတိုးပေးဖို့က မလှယျဘူး မီးမီးတို့ရဲ့…ဒီတော့ မီးမီးတို့နတေဲ့ လူ့ဘုံကို အခု စတုမဟာရာဇျက နတျလူကွီးတှနေဲ့အတူ ဘိုးသိကွားကွီးဆငျးမယျ…မီးမီးတို့ လုံခွုံရေးအတှကျ သကျဆိုငျရာ နတျတှကေို တာဝနျပေးပေးမယျ..ကဲ..ကဲ..ကလေးတို့ မငိုကွနဲ့တော့..လူ့ပွညျပွနျဆငျးဖို့သာပွငျ''
''ဟငျ့အငျး..ပွနျဝူး..ပွနျဝူး..လူတှကေို ကွောကျတယျ..သကျငယျမုဒိနျးသမားတှကေိုကွောကျတယျ..နတျပွညျမှာပဲ နမေယျ''
''ကဲ…ကလေးတို့ရယျ တိတျပါ..တိတျပါ….ဟဲ့..မာတလိ..ဝဇေယန်တာရထားကို အခုခကျြခငျြးပွငျစမျး..ငါလူ့ပွညျကို ဒီကလေးတှနေဲ့အတူ အခုဆငျးမယျ.'' သိကွားမငျး၏ အမိနျ့ဆုံးသညျနှငျ့ မာတလိ မောငျးနှငျသော ဝဇေယန်တာရထားသညျ သုဓမ်မာသဘငျဇရပျရှေ့ ဝုနျးခနဲ ပျေါပေါကျလာလတေော့သညျ။
ဘိုးတျောသိကွားမငျးနှငျ့ စတုမဟာရာဇျနတျ အရာရှိအပေါငျးလညျး မနှဲလေး၊ မကွာဥတို့ ကလေးမလေးနှဈယောကျကို ခြီပိုး..လေးကြှနျးမောငျမောငျ၏ တှနျးလှညျးလေးတှနျးလကျြ ရထားပျေါသို့တငျပွီး လူ့ပွညျသို့ ခရီးဆကျရနျ ပွငျကွလသေညျ။
''ဟေ့..ဒရိုငျဘာမာတလိ..လူ့ပွညျကို မငျးမလိုကျနဲ့..မငျးမလိုကျနဲ့…မဖွဈဘူး…ငါတို့ ရထားကို ဖွဈသလိုပဲ မောငျးသှားကွမယျ…တျောကွာ..ဟိုမှာ တရားခံရှာမရတာနဲ့…မငျးကို တရားခံနာမညျတပျနမှေဖွငျ့..နတျပွညျ နာမညျပကျြရခညျြရဲ့ကှယျ'' ဟူ၏။
ဇူလိုငျ - ၇
အရှေ့အနောက် ယူဇနာတစ်သောင်း၊ တောင်မြောက် ယူဇနာတစ်သောင်း ရှိသော မဟာသုဒသနအမည်ရှိ တာဝတိသာနတ်ပြည်ရှိ ရွေးကောက်ခံ သိကြားမင်းအစိုးရ၏ နှစ်ပတ်လည် နတ်သဘင်ညီလာခံကြီး စတင်လေပြီ။
''တို့ သိကြားမင်းရဲ့ ညီလာခံ….နတ်ကြီးများရဲ့ ညီလာခံ'' ဆိုသော သီချင်းသံများက ပင်လယ်ကသစ်ပင်အနီး ညီလာခံကျင်းပရာ သုဓမ္မာသဘင်ဇရပ်အတွင်းမှ ပျံ့လွင့်လျက်ရှိလေသည်။
ရောင်ဝါမျိုးစုံ တောက်ပနေသော ပင်လယ်ကသစ်ပွင့်တို့၏ ရနံ့ကလည်း ယူဇနာတစ်ရာတိုင်တိုင် ပျံ့နှံ့မွှေးကြိုင်နေ၏။(၃၁) ဘုံအတွင်း တာဝန်ရှိကြကုန်သော နတ်ကောင်း၊ နတ်မြတ်၊ နတ်စမတ်များမှသည် နတ်ကျိုး၊ နတ်ပျက်၊ နတ်ဒုက္ခိတများပါမကျန် ညီလာခံတက်ရောက်ရန် ရောက်ရှိကြပေပြီ။
''သောင်းခန်းလုံးကေသာ၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးကြောင်း၊ သောင်းခန်းလုံးကေသာ၊ ဘုန်းတန်းအဦး၊ တေဇာကြေညာ ကျာ်သဲ၊ မို့မို့ဝေဆာ အာကာဘုံထဲ''
နတ်တို့သနင်း သိကြားမင်းကြီး ထွက်ခါနီးပြီမို့ တစ်သိန်းမျှရှိသော နတ်လော်စပီကာအပေါင်းမှ ညီလာခံသီချင်းကို ပိတ်ကာ သိကြားပင့်နတ်ချင်းကို ဖွင့်ကြလေတော့သည်။
ယခုညီလာခံတွင် ဘိုးတော် သိကြားမင်းကြီး အဘယ်အရာကိုစီးပြီး ထွက်မည်ကို နတ်အပေါင်းက သိလိုစိတ်စောနေကြသည်။ယခင့်ယခင် ညီလာခံများတွင်တော့ သိကြားမင်းသည် သဘင်ထွက်စံရာတွင် ဧရာဝဏ်အမည်ရှိ ဆင်ကို စီးတော်မူလေ့ရှိ၏။သို့သော် တိချစ်သူနတ်အုပ်စုက တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပန်းမှုဖြင့် တရားစွဲမ ည်ခြိမ်းခြောက်သဖြင့် သိကြားမင်းလည်း ဧရာဝဏ်ဆင်ကြီးအား သစ်တောဌာနသို့ ခဏပြန်အပ်လိုက်ရသည်ဟူသည်။မျက်လုံးပေါင်း တစ်ထောင်ရှိသူ၊ အသူရာတို့ကို အောင်နိုင်ခဲ့သူ၊ ဝရဇိန်လက်နက်ကို ပိုင်ဆိုင်သူ ဘိုးတော်သိကြားကြီးကား တိချစ်သူနတ်တို့ကို ကြောက်လှသဖြင့် နတ်သဘင်သို့ ခြေလျင်ပင် ကြွရောက်လာလေတော့သည်။
နကင်းကြီးကားကား၊ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဖြင့် ဘိုးသိကြားကြီးသည် မျက်မှောင်ကိုကြုံ့လျက် ညီလာခံထဲ ဝင်လာလေတော့၏။
''ဟဲ့..သုဇိတာတို့၊ သုမာလာတို့…ဒီလော်စပီကာတွေ ဘယ်အကောင်က ဖင်ယားပြီး ဖွင့်သလဲကွယ်..ဒီလောက် မီတာခတွေ သုံးဆလောက်တက်နေချိန်မှာ လော်တွေအပြိုင်ဖွင့်ပြီး ငါ့ကို ဒေဝါလီခံအောင် လုပ်နေကြသလားဟေ့..အခုပိတ်ခိုင်းစမ်း'' သုဇိတာ၊ သုမာလာ၊ သုနန္ဒာ အစရှိသော သိကြားကတော် သုသုလေးတို့ကား ဘိုးသိကြား၏ အလိုမကျသံကြောင့် ပြာယာခတ်ကျကုန်၏။မကြာမီ လော်စပီကာများ ပိတ်သွားပြီးနောက် ဝိဇယုတ္တရခရုသင်းသံ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။နတ်ညီလာခံကား စပေပြီ။
ဝသ၀တီ၊ နိမ္မာနရတိ၊ တုသိတာ၊ ယာမာ၊ တာဝတိသာ၊ စတုမဟာရာဇ် စသော နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးမှ အဆိုများတင်သွင်းကြ၊ နတ်ဝန်ကြီးများက ရှင်းလင်းကြဖြင့် ညီလာခံကြီး အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတော့၏။
မကြာမီ ညီလာခံကြီး ပြီးစီးတော့မည်။ဘိုးတော်သိကြား ကိုယ်တိုင်သာမက နတ်အပေါင်းတို့ကလည်း နန္ဒာဝန်ဥယျာဉ်တော် မဟာနန္ဒကန်တော်ကြီးဘေးတွင် ကျင်းပမည့် နတ်ဒင်နာပါတီကိုသာ စိတ်စောနေကြသည်။ငြိမ်းချမ်းရေး လာရောက်ဆွေးနွေးသော အသူရာပြည်မှလည်း အသူရပြည်ဖြစ် အသူရာဝေါကာအရက်များ လာရောက်ဆက်သထားသည်ဆိုသည့် သတင်းက ရှကီသမား စတုမဟာရာဇ်နတ်နတ်တို့အတွက် လေချဉ်များပင် ပြို့စေတော့သည်။
ထိုအခိုက် စည်းဝေးသူ နတ်ထုကြီးထဲမှ ကလေးငိုသံများ ဗြဲခနဲ စီနေအောင် ထွက်လာလေတော့သည်။နတ်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၏ ရှင်းတမ်းကြီး ဖတ်ပြချိန်တွင် အိပ်ငိုက်နေသော ဘိုးတော်သိကြားမှာ ကလေးငိုသံများကြောင့် အလန့်တကြား ဖြစ်သွားလေ၏။
''ဟဲ့..ဟဲ့..ညီလာခံထဲ ကလေးမခေါ်ရဘူးလို့..ငါ အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လကွယ်..ဘယ်က ငိုသံတွေတုန်း''
''ဟဲ့..ပလုတ်တုတ်'' အစိမ်းအုပ်စု ဟု အသံကြားသည်နှင့် ဘိုးတော်သိကြားသည် သူထိုင်နေသော ဗန္ဒုကဗ္ပလာမြကျောက်ဖျာကို လက်နှင့်ဖိကာ စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်သွားလေ၏။
''စိုးရိမ်တော်မမူပါနဲ့..ဖျာ့…လူ့ပြည်က အစိမ်းအုပ်စုကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး..လူ့ဘုံမှာ တည်ရှိတဲ့ (၃၇) မင်း နတ်စိမ်းအုပ်စုကို ပြောတာပါ..ဖျာ့''
ထိုအခါမှ သိကြားလည်း သက်ပြင်းကို နာနာချနိုင်တော့၏။''အိမ်းလကွယ်..လူ့ပြည် အစိမ်းအုပ်စုဆိုရင်တော့ ငါသိကြားလည်း ကြောက်သကွယ့်..တော်ကြာ…တာဝတိသာ အာဏာသိမ်းမလား..နတ်ထုထဲ အစိတ်သားထည့်ပေးပါ ခြိမ်းခြောက်မလား ကြောက်လို့ပါကွယ်..ကြောက်လို့ပါ ကဲ..ကဲ..ဟုတ်ပါပြီ…ဒါနဲ့…နတ်သဘင်အစည်းအဝေးထဲ ကလေးမခေါ်လာရလို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားပါလျက်…ကလေးခေါ်လာတာ ဘယ်နတ်စိမ်းတွေများတုန်းဟဲ့''
''ဘယ်သူမှ ခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး.ဖျား..သူတို့ဟာ သူတို့ လာတက်ကြတာပါ..အဲ့ဒါကို နတ်တာဝန်ထိန်းတွေက အတင်း လူပြည်ပြန်ဆင်းခိုင်းလို့ ငိုနေကြတာပါဖျာ့''
''ဟင်..ဘယ်သူတွေတုန်း..ငါ့ တစ်ယောက်ချင်း ထရပ်ပြကြစမ်း''
ထိုစဉ် ကြက်တောင်စည်းကလေးနှင့် အသက် (၂) နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦး မတ်တပ်ထရပ်လေတော့သည်။
''မီးမီးက မင်းမဟာဂီရိနတ် ပန်းဘဲဦးတင့်တယ်ရဲ့ တူမ၊ သုံးပန်လှမဒွေးလှရဲ့ သမီး ရှင်နှဲမိ ခေါ် မနှဲလေးနတ်ပါ..ဘိုးဘိုးသိကြားကြီးရှင့်''
''အေး..မနှဲလေး..မနှဲလေး..အင်းသိပြီ..တကောင်းအုပ်စုကပဲ..ဒါနဲ့ ညည်းဘေးက ကလေးမကရော''
''ဒါက မီးမီးရဲ့ တပည့် နတ်သူငယ်မ မကြာဥပါ..ဘိုးဘိုးသိကြားကြီးရှင့်''
''အောင်မယ်..နှစ်နှစ်သမီးက တပည့်တွေ ဘာတွေနဲ့ပါလားဟ''
''ဘိုးဘိုးသိကြားရဲ့ မွေးစားသား လေးကျွန်းမောင်မောင်လည်း တွန်းလှည်းထဲမှာ ပါလာပါသေးတယ်..ဖျာ့''
''အလို..ကလေးနတ်တွေ အစုံအလင်ပါလားဟဲ့…အသက် ဆယ့်ရှစ်နှစ် မကျော်သေးပဲ…နတ်ပြည်တာဝန် ထမ်းခိုင်းရင် လေဘာလောနဲ့ ငြိမှာစိုးလို့…အသက်မပြည့်တဲ့ ကလေးနတ်တွေကို ဘိုးဘိုးသိကြားက ညီလာခံလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုထားပြီးသားလေကွယ်..ဘာကြောင့် ရောက်လာရသလဲ..ကလေးတို့..လျှောက်တင်ကြစမ်း''
''ဟဲ့.ညည်းတို့ ညည်းတို့တွေ…လူ့ပြည်နေလာတာပဲ လူ့သက်နဲ့ဆို နှစ်ရာချီနေကြပြီ..ဘယ့်နှယ့် အခုမှ မနေချင်ရတာလဲ...ဘာလဲ..လူတွေက ဘဲဥပြုတ် မဆက်ကြတော့လို့လား''
''ဘဲဥပြုတ် ငတ်တာက အရေးမဟုတ်ပါဘူး..ဘိုးဘိုးသိကြား..အခုဟာက လူ့ပြည်မှာ သက်ငယ်မုဒိန်း ဆိုတာတွေ ခေတ်စားနေပါတယ်ဖျား..ခေတ်စားနေပါတယ်''
''အလို…သက်ငယ်မုဒိန်း..အင်း..ဟုတ်ပ..ဟုတ်ပ..အခုတောင်..လူပြည်က နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ အစိုးရမင်းတို့ ဌာနီကြီးက မူကြိုကျောင်းတစ်ခုမှာ သက်ငယ်မုဒိန်းဖြစ်လို့ဆိုကွဲ့''
''မှန်ပါ့ဖျား…သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက တရားခံကို စုံပြီးစမ်းနေကြပါတယ်ဖျား..ဒါပေမယ့် တရားခံက တော်တော်နဲ့ မပေါ်နိုင်ဘူးဖျား''
''အော်..ဒီကလေးမနှယ့်..စကားမတတ်တတတ်၊ မပီကလာနဲ့ ပြောရော့မယ်…စုံပြီးစမ်းတာ မဟုတ်ဘူး..စုံစမ်းတာလို့ ပြောစမ်းပါကွယ်''
''မဟုတ်ပါဘူး ဘိုးဘိုး…သူတို့က ဒီနှာခေါင်းပေါက်လောက် ကျောင်းလေးကနေ အိမ်အပြန်လမ်းက ကိစ္စကို အာဏာ၊ ပါဝါ၊ အသပြာ အားတွေအစုံနဲ့ ပြည်သူကို သွေးတိုးစမ်းသလို လုပ်နေကြလို့ စုံပြီးစမ်းတယ်လို့ ပြောတာပါဖျား''
''အိမ်း..ကြားတယ်..ကြားတယ်..ဘိုးဘိုးလည်း ဒီသတင်းကြားပြီး တယ်လည်း စိတ်ထဲ မသက်သာလှဘူး..ဒါနဲ့…အမှုက တရားခံဖမ်းနိုင်သွားပြီဆိုကွဲ့''
''ပြည်သူအများစုကတော့ ဒွိဟနဲ့ပါ..ဖျား…စစ်ဆေးပြီး အပြစ်မရှိပါဘူးဆိုပြီး ပထမတစ်ခါ လွှတ်လိုက်တဲ့ တရားခံကို ဒုတိယအကြိမ်ကျ တရားခံဆိုပြီး ပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့..ထင်ကြပြီပေါ့ဖျား''
''အေးပေါ့..အေးပေါ့...ဒါနဲ့ ညည်းလေးတို့ကရော ကျုပ်တာဝတိသာကို ရောက်လာကြတာ ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာဆိုင်သတုံး''
''ဆိုင်တာပေါ့..ဘိုးဘိုး..မီးမီးတို့က ကလေးတွေလေ ဖျား''
''နတ်လည်း နတ်နတ်ပဲ ဖျား..လူမင်းဘုန်းကြီး နတ်မင်းမနေသာ ဆိုတဲ့စကား ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လားဖျား.. အခု လူမုဒိန်းသမား ဘုန်းကြီးရင် နတ်ကလေးတွေလည်း ဘယ်နေနိုင်မတုန်းဖျား…တော်ကြာ သက်ငယ်မုဒိန်းပြီးလို့ နတ်ငယ်မုဒိန်းဖြစ်လာရင် ကိုယ်ကျိုးနည်းမှာဖျား.ဒါကြောင့်..လူ့ပြည်ကနေ နတ်ပြည်ကို ပြောင်းရအောင် ထရန်စဖာ လာတင်တာပါဖျား''
ဘိုးသိကြား ခေါင်းစားလေပြီ။''အိမ်း..နတ်သူငယ်တွေနဲ့တော့ ခက်တာပဲ'' ''မခက်ပါဘူးဖျား..လုံခြုံပါတယ်ဆိုတဲ့ မူကြိုထဲတောင် ဒင်းတို့က ဝင်ဒိန်းသေးတာ..မီးမီးတို့ နတ်ကွန်းတွေဆိုတာ တံခါးတွေဘာတွေ ရှိတာမဟုတ်ဘူးဖျား..ဘဲဥဝင်ဆက်သလိုလိုနဲ့ ဒိန်းသွားမှာ စိုးပါတယ်ဖျား''
''ကဲ..ကဲ…ဒီကိစ္စ ဘိုးဘိုးသိကြား ဖြေရှင်းပေးပါ့မယ်…စတုမဟာရာဇ်ဘုံးအောက်က နတ်စိမ်းတွေကို ရာထူးတိုးပေးဖို့က မလွယ်ဘူး မီးမီးတို့ရဲ့…ဒီတော့ မီးမီးတို့နေတဲ့ လူ့ဘုံကို အခု စတုမဟာရာဇ်က နတ်လူကြီးတွေနဲ့အတူ ဘိုးသိကြားကြီးဆင်းမယ်…မီးမီးတို့ လုံခြုံရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နတ်တွေကို တာဝန်ပေးပေးမယ်..ကဲ..ကဲ..ကလေးတို့ မငိုကြနဲ့တော့..လူ့ပြည်ပြန်ဆင်းဖို့သာပြင်''
''ဟင့်အင်း..ပြန်ဝူး..ပြန်ဝူး..လူတွေကို ကြောက်တယ်..သက်ငယ်မုဒိန်းသမားတွေကိုကြောက်တယ်..နတ်ပြည်မှာပဲ နေမယ်''
''ကဲ…ကလေးတို့ရယ် တိတ်ပါ..တိတ်ပါ….ဟဲ့..မာတလိ..ဝေဇယန္တာရထားကို အခုချက်ချင်းပြင်စမ်း..ငါလူ့ပြည်ကို ဒီကလေးတွေနဲ့အတူ အခုဆင်းမယ်.'' သိကြားမင်း၏ အမိန့်ဆုံးသည်နှင့် မာတလိ မောင်းနှင်သော ဝေဇယန္တာရထားသည် သုဓမ္မာသဘင်ဇရပ်ရှေ့ ဝုန်းခနဲ ပေါ်ပေါက်လာလေတော့သည်။
ဘိုးတော်သိကြားမင်းနှင့် စတုမဟာရာဇ်နတ် အရာရှိအပေါင်းလည်း မနှဲလေး၊ မကြာဥတို့ ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ကို ချီပိုး..လေးကျွန်းမောင်မောင်၏ တွန်းလှည်းလေးတွန်းလျက် ရထားပေါ်သို့တင်ပြီး လူ့ပြည်သို့ ခရီးဆက်ရန် ပြင်ကြလေသည်။
ရထားထွက်ခါနီးတွင် သိကြားမင်းက ရုတ်တရက် တစ်စုံတစ်ခုကို စဉ်းစားမိဟန်ဖြင့် ရုတ်တရတ် ယခုလို ထအော်လိုက်လေသည်။
''ဟေ့..ဒရိုင်ဘာမာတလိ..လူ့ပြည်ကို မင်းမလိုက်နဲ့..မင်းမလိုက်နဲ့…မဖြစ်ဘူး…ငါတို့ ရထားကို ဖြစ်သလိုပဲ မောင်းသွားကြမယ်…တော်ကြာ..ဟိုမှာ တရားခံရှာမရတာနဲ့…မင်းကို တရားခံနာမည်တပ်နေမှဖြင့်..နတ်ပြည် နာမည်ပျက်ရချည်ရဲ့ကွယ်'' ဟူ၏။
ဇူလိုင် - ၇